China Soft PVC Coasters fekitori uye vagadziri | SJJ
Shandisa iyo Soft PVC Coasters kuchengetedza tafura yako uye tafura uye mukombe. Izvi zviri kuita kuti hupenyu hwako huwedzere uye hunonaka. Coasters anowanzo shandiswa mumabhawa, Mabiko, mhuri uye mapato. Isu tinogara tichigadzira maCoasters neSoft PVC, silicone, Simbi, huni kana pepa sarudzo. Iwo eSoft PVC Coasters ari t ...
Shandisa iyo Soft PVC Coasters kuchengetedza tafura yako uye tafura uye mukombe. Izvi zviri kuita kuti hupenyu hwako huwedzere uye hunonaka. Coasters anowanzo shandiswa mumabhawa, Mabiko, mhuri uye mapato. Isu tinogara tichigadzira maCoasters neSoft PVC, silicone, Simbi, huni kana pepa sarudzo. Iwo maSoft PVC Coasters ndiwo anozivikanwa kwazvo nekuda kweanopokana-nemvura hunhu. Kubata kapu, girazi, kana mukaka une mvura, Soft PVC Coasters inogona kudzivirira kunyorova uye kutyora munguva pfupi. Iine iyo inochinja yeSoft PVC zvinhu, Soft PVC Coasters haigone kutyoka kana ma coasters akadonha pasi kubva patafura kana tafura. Soft PVC Coasters zviri nyore kuisa marogo ako ane mavara kumberi kana kumashure mashure, aine akadhirowewa, akaraswa, ruvara rwakazadzwa, rwakadhindwa kana rwakatemwa maitiro ehunyanzvi. Iyo yakapfava PVC Coasters inogona kuve imwechete dhizaini, zvidimbu zviviri, zvidimbu zvitatu kana chero huwandu pa seti yekutakura.
Iyo yakapfava PVC Coasters yakachipa ine mhando yepamusoro, mavara ane mavara, uye akajeka magadzirirwo, akanaka kwazvo kusimudzira kana zviyeuchidzo zvekuchengeta kwenguva yakareba. Zvakajairika maumbirwo eSoft PVC Coasters idenderedzwa kana mativi, saizi mune angangoita 80 ~ 100 mm, asi zvimiro uye saizi iwe yaunokumbira inogara ichiwanikwa nediki shoma yekumisikidza charge. Yedu Soft PVC Coasters inogadzirwa nehushamwari uye zvakatipoteredza Nyoro PVC zvinhu, zvinogona kupihwa munguva pfupi nemitengo inonzwisisika uye mhando zvakare.
Motifs: Kufa Yakarohwa, 2D kana 3D, isina kana maviri mativi
Kupedza: Mhando dzese dzezvimiro, maLogo anogona kudhindwa, akavezwa, Laser rakatemerwa zvichingodaro
Zvakajairika Zvakabatanidzwa Sarudzo: Hapana chinongedzo kana chakagadzirwa
Pashure: Yakapfava PVC Cable Winders
Zvadaro: Nyoro PVC Mikwende Matagi
Zvishoma nezvishoma mumatope Kufamba Pini
Mirror Inogonesa Mari kana Mint Proof Mari